India: Hurumende Inofanira Kupa Hanzvadzi Vanoshevedza Kuvandudza Kwenguva refu- India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Hurumende Inofanira Kupa Hanzvadzi Vanoshevedza Kuvandudza Kwenguva refu- India News
NEW DELHI: The Ministry of Defense uye mauto akabvumirana kuti ape nzvimbo ye "yekare yeuto zvekuchengetedza zvehondo (MNS). kubvumira avo vanoshumira sebrigadiers uye pamusoro kuti vatakure mahwendefa epanyeredzi pamotokari dzavo, sezvimwe vamwe vakuru veuto .
Mamiriro eESM achaita kuti vatungamiri veNMS vakurega kutora mararamiro kuti vawane makadhi ekuzivikanwa, vachitsvaga basa mumasangano ehurumende / PSU uye vashandise mapurogiramu akasiyana-siyana ekugadzirisa mapoka ehondo. I-MNS, iyo chete yevanhukadzi-mapoka ehurumende mumauto ehondo, iye zvino ane 5 300 mapurisa ari pabasa. Asi ivo havana kumbobvumirwa nehutano uye ropafadzo dzevamwe vakuru vakuru veuto, kusanganisira vanachiremba.
Chisarudzo chehurumende chakauya mushure mekutonga kwenguva refu kwematare kwakatungamirirwa nevamwe veMNS mahofisi, kusanganisira Major-General Usha Sikdar (ret), pamusoro pehuwandu hwavo sevakuru pasi pevarwi. Vakasimudza nyaya dzakasiyana-siyana dzeCNUMX dzakabatana nekodzero dzakakodzana uye neropafadzo dzevamwe vavo sevatumwa vakuru. Semuenzaniso, vazhinji veMNC mahofisi vanoramba vasingafari kuti mairi yunifomu-mirivhi yakaoma yakatsiviwa ne 28 safari-style yakaita seyunifomu yemaoko.
Mune 2010, Armed Forces Tribunal (AFT) yakaraira hurumende kutarisana nayo vanamukoti hanzvadzi akasungirirwa nevatungamiriri vemazuva ose maererano nehutano uye kodzero mushure mekunge Major-General Sikdar akanyepedzera "kunyadziswa nekuzvidzwa" panguva yekushanyira chipatara chechikepe mu Mumbai paakanga ari vakaramba vashandi vake "vane kodzero" pamusoro weMNS mu2003, motokari ine iplate uye nyeredzi mureza. Asi Dhipatimendi reNational Defense rakakumbira chisarudzo cheAlt kuDare Repamusorosoro, iyo nyaya yacho ichiri kumirira.
Zvimwe zvekuzvidzivirira zvakati musi weChishanu kuti iyo nhatu yedhipatimendi inotungamira uye iyo Ministry of Defence ikozvino yakasarudza kubvumirana nemamiriro ezvinhu eMSS evakuru veNMS, asi dzimwe shanduko dzehutano ku "tsanangudzo iripo" ichadiwa. kukurukurirana neDhipatimendi reVashandi uye Kudzidzisa.
"Matambudziko emitemo ari pangozi uye misangano yakarongeka kuti igadzirise mushure mokubvumirwa kweMakurukota eVashandi uye Mukuru weVashandi," akadaro bhuku. IIndia MNS yakasikwawo muna Gumiguru 1926 kuti ishande sekuchengetwa kwekuchengetedza mauto kuIndia. MunaSeptember 1943, IMNS yakava chikamu che yehondo yeIndia uye nhengo dzebasa racho dzakava vatungamiriri.
Ndiani ainzi Nzo Ekangaki, murume uyo akanyengera chifananidzo cha Cameroon kuOAU? - CAMEROON MAGAZINI